Olee otú iji weghachi-ehichapụ nchekwa si mpụga ike mbanye
> Resource> Naghachi> Olee naghachi ehichapụ nchekwa si ​​mpụga ike mbanye
Data ọnwụ nwere ike ime
Ndị mmadụ na-amalite iji mpụga ike mbanye ọzọ na ndị ọzọ mgbe. Dị nnọọ anya na m bi: ọ na-eme ya nile mmasị fim, E-akwụkwọ, na onye ozi na ya mpụga ike mbanye. Ọ bụ ezie na m maara ihe mere o ji na-enwe mmasị mbanye nke ukwuu, m na-eche ma ọ bụrụ na ọ na-aga crazy mgbe niile data na mbanye na-efu. Ọ bụrụgodị na o ga-aga crazy, adịkwa bara uru data bụ agbawa obi. I nwere ike dị iche n'echiche ihe ma ọ bụrụ na ị kwụsịrị gị niile afọ 'mmasị collections.
N'ezie, ihe ndị dị ka nke nwere ike-ebe. Mgbe ọ chọrọ ka ihichapụ otu faịlụ, ma mmadụ na mberede ehichapụ dum nchekwa; mgbe ọ ngwa ngwa enwe 'Mgbanwe + Del', ma hụrụ na e ọ bụla ndabere; ma ọ bụ faịlụ nọ na-arahụ ruru ka ndị ọzọ ndị mmadụ ndudue arụmọrụ, na mgbe ọ na-efu ndị data. Olee otú ime nchekwa mgbake?
Ụzọ dị mfe iji naghachi ehichapụ nchekwa
Mgbe nke a mere, ihe si na uche anyị bụ a data mgbake. Nke ahụ bụ na-ekwu, na-eji a data mgbake ka naghachi ehichapụ nchekwa na ada ụda oké oke, dị ka Wondershare Data Recovery, a ọkachamara na a pụrụ ịdabere data mgbake omume na elu àgwà na nche. Na dị nnọọ 3 nzọụkwụ, ị nwere ike naghachi gị ehichapụ nchekwa ngwa ngwa na rụọ ọrụ nke ọma, na ọ dịghị tech-nkà mkpa. ma ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, biko ịhọrọ Data Recovery for Mac (maka Mavericks), nke na-eme otu ihe ahụ.
Atụmatụ: Adịghị wụnye ihe omume na isi iyi nkebi ebe ị na-aga na-agbake furu efu data.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị mpụga ike mbanye na kọmputa na ẹkedori data mgbake. Họrọ Lost File mgbake maka Windows ọrụ ma ọ bụ ehichapụ File Iweghachite maka Mac ọrụ.
Nzọụkwụ 2. Họrọ ike mbanye na-amalite ike iṅomi.
Nzọụkwụ 3. Mgbe Doppler, ifiọk na-elele recoverable faịlụ na-amalite na-agbake.
Ebe i nwere ike kpamkpam ịgbanwee n'etiti "File Ụdị" na "ụzọ" nke faịlụ. The "File Pịnye" classifies faịlụ n'ime doro anya edemede dị ka photos, video, audio, akwụkwọ, email, wdg, ebe "Ụzọ" ọnọde ị faịlụ dị ka ihe mbụ na ọnọdụ gị na kọmputa.
Naanị ihe ị mkpa ịṅa ntị bụ: Unu ịzọpụta natara faịlụ ka ohere ebe ị furu efu gị faịlụ na mbụ, dị nnọọ na-mma echiche.
Ihe i kwesịrị ịma: Ị pụrụ ịma eziokwu na furu efu data na-adịghị kpochapụrụ na-adịgide adịgide, ruo mgbe ọhụrụ data na-edochi ya. Ihe i kwesịrị iburu n'uche gị bụ ndị na-adịghị ịzọpụta ọ bụla ọhụrụ data ebe ị kwụsịrị mkpa data, ma ọ bụ nke furu efu data ga-overwritten site ndị ọzọ, nke na-eme ka o sie ike naghachi ehichapụ nchekwa.
Video nkuzi nke nchekwa mgbake
Olee otú Naghachi Photos si Canon PowerShot G12
Cell Phone Photo Recovery: Naghachi Losr ma ọ bụ ehichapụ Photos si Cell Phone